“မဟာဂီတ အမှတ်တရ” ဗွီဒီယို အပြည့်အစုံ | U.N.O.B
စာပေဟောပြောပွဲညမှ ဒေါ်မာမာအေး၏ မဟာဂီတ အမှတ်တရ ဟောပြောမှု ဗွီဒီယို အပြည့်အစုံ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Flash Player ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Web Site ပေါ်တွင် ဗွီဒီယို ကြည့်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါက မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Full length video of Daw Mar Mar Aye’s speech “Mahar Gita”.
aung zay ya July 24, 2013 at 8:55 am Reply
thank you my brother do you need from south korea I can help you
Chann October 11, 2012 at 5:07 pm Reply
Very very good. Thanks.
LeaveaReply to Chann Cancel reply
Concert Videos from Orlando
Some show videos from Orlando night. Enjoy… visit this channel for more videos,, http://www.youtube.com/htunlinnlatt .. …. ….. ….